Khai Deih NeamDigital Marketing ExecutiveJob interview တစ်ခုကို ဖြေပြီးသွားတဲ့အချိန်က အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား။ ကျွန်တော်တို့ အများစုက job interview ဆိုရင် မဖြေခင်ကိုပဲ အရေးကြီးတယ်လို ထင်တတ်ကြပါတယ်။အမှန်တကယ်က မဖြေခင်အချိန်ကော ဖြေပြီးသွားတဲ့အချိန်ကော နှစ်ချိန်လုံး အရေးကြီးပါတယ်။Job interview ဖြေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတောင်မှ သင်က အလုပ်ရဖို့ သေချာတဲ့ အပြုအမှုတွေကို လုပ်လို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ သင့်အပြုအမှုတွေကို interviewer တွေက အထင်ကြီးသွားစေနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တာကြောင့် Interview ပြီးသွားတဲ့အခါ လုပ်ရမယ့် အပြုအမှုတွေကို လေ့လာလိုက်ပါဦးနော်။၁။ နောက်တဆင့်က ဘာလဲဆိုတာနဲ့ Follow Up လုပ်ရမယ့်သူကို မေးပါ။Interview ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ Hiring ...
Tips To Success In Coding Tests
Aung Ko ThetTechnical Team LeadCoding Test ဆိုတာ Developer တစ်ယောက်အတွက်Tech Company တစ်ခုကို join တော့မယ်ဆိုရင် များသောအားဖြင့် ဖြေရတတ်တဲ့Test တမျိုးပါ။ Coding Test ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် များစွာ ရှိပါတယ်။&nbsp;•&nbsp;&nbsp;&...
How To Write Constructive Email Body
Khant Zaw Hein Digital Marketing ExecutiveNew Day Jobs ဆိုတာ အလုပ်အကိုင်များစွာကို တစ်နေရာတည်းမှာ ရှာဖွေလျှောက်ထားနိုင်တဲ့ အလုပ်အကိုင် website ဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်အကိုင်များကို လျှောက်ထားနိုင်လိုပါက&nbsp;New Day Jobs&nbsp;မှတဆင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
Khai Deih NeamDigital Marketing ExecutiveWork From Home လုပ်နေရပြီး လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်ဖြစ်တဲ့သူတွေနဲ့ အလုပ်စားပွဲကနေ ထိုင်ရာက မထပဲ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့သူတွေအတွက် လွယ်ကူပြီး ကိုယ့်ရဲ့ စားပွဲမှာပဲ လုပ်လို့ရတဲ့ streching&nbsp;လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။1. Neck StretchNeck stretch ကတော့ နာရီပေါင်းများစွာ အလုပ်လုပ်လို့ တင်းနေတဲ့ သင်ရဲ့ ပုခုံးနဲ့ လည်ပင်းက အကြောတွေကို ဖြေလျော့သွားစေမယ့် အကြောလျော့နည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ လည်ပင်းအကြောလျောတဲ့အခါ ခုံတစ်လုံးမှာ မတ်မတ်ထိုင်ပါ။သင့်ခြေထောက်နှစ်ချောင်းလုံးကို ကြမ်းပြင်နဲ့ ညီအောင်ထားပါ။စပြီး အသက်ကို ရှုသွင်း ရှုထုတ်ပြုလုပ်ပါ။ပြီးရင် သင့်ခေါင်းကို စောင်းပြီး တစ်ဖက်မှ တစ်ဖက်ကို ဖြေညင်းစွာ လှည့်ပေးပါ။လှည့်တဲ့အခါမှာ သင့်ခနာကိုယ်ပေါ်က မလိုလားအပ်တဲ့ ဖိအားတွေကို ထိန်းချုပ်ထားပါ။သင့်လိုအပ်သလောက် အကြောလျေ့ာခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။2. Side Stretchဒီလေ့ကျင့်ခန်းကတော့ သင့်ကို နောက်ကျောနဲ့ခါး နာကျင်ခြင်းတွေနဲ့ တင်းမာခြင်းတွေကို သက်သာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်လုပ်လို့ ထိုင်ခုံမှာ ထိုင်ပြီး လုပ်လို့ရတဲ့အကောင်းဆုံး လေ့ကျင့်ခန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ခုံမှာ မတ်မတ်ထိုင်ပြီး လက်မောင်းတွေကို သင့်ခေါင်းအပေါ်မှာ မြှောက်ထားပါ။ဝင်လေ ထွက်လေကို ရှုပြီး မြှောက်ထားတဲ့ သင့်လက်တွေကို တူတူပူးကပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင် သင့်ပုခုံးတွေကို ဘေးကို စောင်းပါ။ပုခုံးတွေကို အနည်းဆုံး စက္ကန့် ၂၀ သို့မဟုတ် ၃၀ အကြောလျော့သင့်ပါတယ်။3. Upper Back ...